Shell Grotto, omimi nke English nke shells | Akụkọ Njem
Na gburugburu obodo Bekee nke Margate na ógbè Kent, ị hụrụ ihe omimi ọgba a chọrọ karịa 4 nde seashellss Aha ya bụ Shell Grotto na ọ bụ ihe nkiri ndị njem na enigmas ekpuchi: ọ dịghị onye maara onye wuru ya, ma ọ bụ mgbe, ma ọ bụ maka ihe.
A chọpụtara Shell Grotto na 1835 site James newlove, otu onye bi n’ime obodo na-egwu ala ya iji wuo odo odo. Newlove hụrụ ngwa ahịa azụmaahịa nke ihe ọ hụrụ ozugbo, ya mere ọ wụnyere oriọna gas iji mee ka paseeji nwee ìhè na afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, emepere ụzọ ahụ n'ihu ọha. Ozugbo ndị ọbịa mbụ kwụrụ ụzọ ha ka ha hụ ọwara ala ala ala ahụ nke mkpokoro na-ekpuchi, arụmụka banyere mmalite ya malitere.
Nke a bụ, na nchikota ya nkenke, ihe a maara maka ebe a: n'ime enwere ihe dị ka nde shek 4,6 nke ụdị mollusks dị iche iche (tumadi okuko, ejula, mọsteli na oysters), ha nile jikọtara ya na mgbidi na uko ụlọ. Ha rapaara n'ụdị ụdị ụrọ e ji azụ azụ.
E nwere echiche dị iche iche iji kọwaa ya malite. Somefọdụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kwuru na ọ bụ oge ochie kemgbe ọtụtụ puku afọ, ndị ọzọ jikọtara ya na ihe osise ya na ihe ịchọ mma ndị yiri nke ndị Finishia, ebe ndị ọzọ na-atụ aro na ọ bụ ebe nzuzo nzuzo nke ụfọdụ ịrọ òtù ndị ọgọ mmụọ n'oge ochie. Maka ugbu a ilu ahụ edozighị.
Mpempe akwụkwọ ndị a na-ekpuchi ebe dị mita 2.000 nke grotto na ọ na-aghọ otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị mkpa nke Kent.
Ozi ndị ọzọ - Pluckley, England: obodo mọ
Ihe onyonyo: igodo.nke
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Shell Grotto, omimi nke English nke shells